Diyaarad Rakaab Siday Oo Dab Xoogan Qabsaday. – Calamada.com
Diyaarad Rakaab Siday Oo Dab Xoogan Qabsaday.
calamada October 29, 2016 1 min read
Ugu yaraan 20 ruux ayaa dhaawacmay kadib markii uu dab qabsaday diyaarad rakaab ah wakhti ay dooneysay inay ka duusho garoonka diyaaradaha O’Hare ee Gobolka Chicago ee Wadanka Mareykanka.
Waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan waxa sababay shilkaasi. Wakaaaladda duulista hawada ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in mid ka mid ah Taayeerada diyaaradda uu qarax sameeyay, iyadoo Shirkadda iska leh diyaaraddana ay sheegtay inay dhacday ciladda xagga Matoorka ah.
Wakaaladda Duulista hawada waxay tilmaantay in dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa la daad gureeyay, iyadoo illaa iyo hadda aan la sheegin cid ku dhimatay Shilkaasi, marka laga soo tago 20ka ruux ee dhaawacyada ay soo gaareen.
Diyaaraddan oo tirsiga duulimaadku uu ahaa 383, islamarkaana taabacsan Shirkadda duulimaadyada ee dalka Mareykanka ayaa waxay dooneysay inay ka duusho Garoonka diyaaradaha ee Chicago, iyadoo kusii jeeday magaalada Miyami ee gobolka Falorida, waxaana saarnaa 161 rakaab ah iyo Sagaal howl-wadeenno ah.
Muuqaalo ay baahiyeen Telefeshinada ayaa waxay muujinayeen dadka rakaabka ah oo si dag dag ah uga soo baxaya diyaaradda, iyo Uuro iyo holac cirka isku shareeray, iyadoo goobta ay si deg deg ah ku gaareen Kooxaha dab damiska iyo kuwa gurmadka deg degga ah.
Shilkan waxa uu sidoo kale sababay inuu dibÂ dhac ku yimaado qaar ka tirsan diyaaradaha rakaabka ee ka duuli lahaa Garoonka O’Hare ee Gobolka Chicago, inkastoo Saraakiisha Waaxda duulimaadyada ee dalka Mareykanka ay Saacado kadibÂ sheegeen inay dib u billowdeen howlihii Garoonka.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 28-01-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Waaliga Galgaduud Oo Ka Hadlay Itoobiyaanka Ku Wada Dagaalamay Ceelbuur.